Olee otú ịzụta backlinks PR9?
Ole ọnụọgụ ndị na-abata na njikọ ndị ọzọ bụ ihe abụọ onye nwe ụlọ weebụ ọ bụla kwesịrị ịtụle tupu ị kwubie banyere ọganihu nke ebe nrụọrụ weebụ ya.Enweghị ike ịchọta ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị usoro okporo ụzọ mgbe nile ka ọ bụrụ ihe ịga nke ọma, na ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị okporo ụzọ a gbanwere agbanwe enweghị ike ịdị.
Ka anyị were ọnọdụ nke ị ga-ahọrọ n'etiti ebe dị elu na saịtị na-ebuteghị okporo ụzọ na saịtị PR dị ala na 2000 ndị ọbịa kwa ụbọchị. Kedu ihe ị ga-ahọrọ? Ị nwere ike ịhọrọ njikọ dofollow site na saịtị PR dị elu, ma ọ bụ njikọ njikọ site na saịtị PR dị ala. N'ezie, o siri ike ịhọrọ n'etiti ụdị abụọ a. Ọ bụrụ na ị gaa maka ala, ị ga-enweta tọn okporo ụzọ, ọ bụrụ na ị gaa maka dofollow, ị ga-enweta mmụba na ọkwa.
Ọ dị mkpa ịghọta ọdịiche dị n'etiti dofollow na njikọ njikọ. Njikọ na tagollow tag na-agwa search engines ghara ịgbaso saịtị gị site na njikọ ma ọ bụ iji gbochie njikọ njikọ mmiri na-asọba na ya. Njikọ na tag dofol, na okwu ha, gwa engines ọchụchọ ka ị soro blog gị ma ọ bụ kesaa gị na saịtị.
Webmasters na-agbadata okwu banyere blogs dofollow n'ihi na ọ dị mkpa ịchọpụta njikwa search engine.Omume dị otú ahụ dugara n'ọtụtụ ọnụ ọgụgụ nke spam. Ọ bụ ya mere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke blọọgụ ji nọrọ ala n'oge anyị.
Gịnị bụ okporo ụzọ ma ọ bụ backlinks dị mkpa ma otu esi enweta ma?
Uru ahia okporo ụzọ
O doro anya na okporo ụzọ bụ mkpa mbụ nke azụmahịa niile dịka otu a ga esi esi nweta ego dị elu. Jụọ gị ajụjụ mere i ji zụlite azụmahịa gị n'ịntanetị? Azịza ya ga - abụ otu ihe ahụ - iji nwetakwu okporo ụzọ ma gbanwee ya ka ọ na - akwụ ụgwọ. Ọzọkwa, mmụba na okporo ụzọ na-ewuli aha gị na ika aha gị na ike gị na ọnụnọ mgbasaozi gị. Ịnwere ike ịkwalite okporo ụzọ gị site na ntanetị mgbasa ozi mmekọrịta na mgbe niile. Ma mechaa, ọ ga - eme ka okporo ụzọ gị dị elu, ọ ga - arị elu karịa ego gị. Otú ọ dị, enwere mbelata okporo ụzọ - ọ dịghị adịgide adịgide.
Uru azụ azụ
Ọ bụ eziokwu a maara nke ọma na backlink na-egbugbu na isi nke nyocha ọ bụla nke ịchọpụta nyocha. Ịbawanye na backlinks na-enye gị ọkwa dị elu na nsonaazụ ọchụchọ ọkwalite mgbasa ozi gị. Ịdị elu ị na-agbaso, ka ndị ahịa ndị ọzọ ga-amata banyere ika gị. Ụfọdụ backlinks nwere ike stampụ na-adịgide adịgide, na-enye gị okporo ụzọ na-adịghị agwụ agwụ. Otú ọ dị, n'agbanyeghị ogo nke njikọ gị na-abata, Google nwere ike ịrite ma ọ bụ dozie saịtị gị. Ọ bụrụ na usoro ihe a achọpụtaghị njikọ gị ọbụghị na-enweta, ị ga-enweta ntaramahụhụ siri ike nke nwere ike belata okporo ụzọ na ahịa gị.
Ọ bụ ya kpatara ya, ọ dị mkpa ịrụ ọrụ maka ịzụ ahịa, ọ bụghị maka backlinks iji nweta okporo ụzọ na-agafe na saịtị gị, ị ga-arụrịrị njikọ njikọta ọ bụla. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ backlinks, rụọ ọrụ maka okporo ụzọ.
Olee otú ịzụtaghachi azụlinks PR9?
Ebe nrụọrụ weebụ ndị dị otú ahụ dịka Websiteoutlook, Alexa, Quantcast, na Aboutdomain nwere ike ịbụ nnukwu maka inweta akwaazụ backlinks na oge ọ bụla. Iji chọta weebụsaịtị dịka ndị a, naanị ị nwere ike ịme nchọgharị weebụ n'etiti saịtị na niche gị. Nnukwu ududo weebụ crawlers saịtị ndị a mgbe nile, ọ bụ ya mere ọ bụ ohere gị iji mee ka saịtị gị gụọ akwụkwọ ngwa ngwa. Nyefee ebe nrụọrụ weebụ gị gaa n'ọtụtụ n'ime ihe ndị a gbasara nyocha, ị ga-ahụ ọkwa ọkwa na-abawanye n'ime awa 24 Source .